အဓိကပါဝါ:5.5 KW အဆင့်သုံးဆင့်
Feed ရောစပ်စက်သည်အဓိကအဆင့်ဖြစ်သည် တောင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံကိုကျွေးမွေး အစာတောင့်များ၏အရည်အသွေးအပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်. Feed ရောနှောစက်များသည်အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းအမှုန့်များကိုအညီအမျှရောနှောရန်လုပ်ဆောင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အရည်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရောစပ်ရန်အတွက်အာဟာရအရည်များကိုထည့်ရန်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။. အလွန်အမင်းရောစပ်ပြီးနောက်, အရည်အသွေးမြင့်မားသောအစာကျွေးခြင်းလုံးလေးများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်လမ်းကိုပြင်ဆင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးစိတ်ကြိုက်ရောစပ်ထားသောစက်များသည်ဈေးကွက်တွင်လူကြိုက်များသည်.
Feed Mixing Machine Features
1. ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောအမှုန့်ပစ္စည်းများရောနှောခြင်းသို့မဟုတ်အမှုန့်များကိုအရည်နှင့်ရောနှောခြင်းသက်ဆိုင်သည်. ဤအစာကျွေးခြင်းရောနှောစက်ကိုအစာတောင့်တောင့်ပြုလုပ်ရာတွင်ကုန်ကြမ်းများရောစပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်.
2. ဖြစ်နိုင်ခြေအချက်များအောက်မှာ, အမှုန်များ၏အရွယ်အစားနှင့်သိပ်သည်းဆရောထွေးရလဒ်မထိခိုက်ပါဘူး, စေးကပ်သောပစ္စည်းများအဘို့, ကနေဆဲကောင်းတစ် ဦး ရောထွေးရလဒ်ရှိပါတယ်.
4. တစ်ခုတည်းသောဝင်ရိုးဖြင့်ပါ ၀ င်သောဤအစာကျွေးခြင်းရောနှောစက်သည်အလွှာနှစ်ခုဖဲကြိုးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများဖြင့်ပစ္စည်းများကိုရောစပ်ပေးသည်. ပစ္စည်းများအပြည့်အဝရောနှောနိုင်ပြီးရောနှောတူညီနေတိုးတက်လာရမည်ဖြစ်သည်.
5. ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ်ရဟတ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုချမှတ်. rotor နှင့် casing ကြားရှိရှင်းလင်းမှုသည်သုညနီးပါးသို့ချိန်ညှိနိုင်သည်, ကျန်ရှိသောပစ္စည်းများကိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သည်.
6. ယေဘုယျအားဖွဲ့စည်းပုံမှာပိုမိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်, လှပသောအသွင်အပြင်, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူပြီးထိန်းသိမ်းရန်အဆင်ပြေသည်.
7. ဒီဖဲကြိုး feed ကိုရောနှောစက် features နဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ, အသေးစားcoverageရိယာလွှမ်းခြုံ, ဝတ်ဆင်ရန်ခံနိုင်ရည်, အနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝ,စသည်တို့. ၎င်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
8. အစာတောင့်များကြိတ်ခွဲစက်တွင်ကုန်ကြမ်းများရောစပ်ရန်သင့်တော်သည်, ဓာတုအပင်,စသည်တို့.
Feed Mixing Machine ကိုလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း
♦ ရောနှောစတင်ပြီးနောက်, ပြောင်းပြန်လှည့်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်၎င်း၏အချိန်မီပြေးလမ်းကြောင်းကိုစစ်ဆေးပါ.
♦ အတွက်အသုံးပြုပြီးနောက် 15 ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ရက်ပေါင်း, ချောဆီကိုလွှတ်ပေးပြီးဆီတိုင်ကီကိုသန့်ရှင်းပါ; သုံးလတစ်ကြိမ်အမြန်နှုန်းလျှော့ချသည့်စက်ဆီချောဆီကိုပြောင်းပါ, နှင့်နှစ်လတိုင်း bearing မှအမဲဆီဖြည့်ပါ.
♦ ရောနှောခြင်း၏အသေးစားပြုပြင်မှုလိုအပ်ပါသည် 1800 နာရီ '' ပုံမှန်ပြေး, အဓိကအားဖြင့်ချောဆီကိုစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်အဝတ်အစားအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးရန်; ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်လိုအပ်သည် 4000 နာရီ '' ပုံမှန်ပြေး, အဓိကအားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်သန့်ရှင်းစေရန်ဖြုတ်တပ်ရန်ဖြစ်သည်, အားလုံးဝတ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စံအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ဖြေရှင်းပေးရန်.
အလျားလိုက်အစာကျွေး Blender ၏သတ်မှတ်ချက်